Akwụkwọ Ahịa Ahịa Ahịa & Oge Ọhụrụ nke Na-ere | Martech Zone
N'ebe ire ere taa, imerime ihe ịma aka nwere ike igbochi ndị ndu azụmaahịa inyere ndị otu ha aka imezu ebumnuche ha. Site na ngwa ahia ohuru na-adaba iji wepu usoro, ndi na-ere ahia na-etinyekwu oge na oru nhazi na obere oge ire.
Iji mee ka uto dị ngwa, belata arụmọrụ n'ime otu nzukọ ma belata ntụgharị na ahịa, ndị isi ahịa ga-ehiwe usoro dị agile na mgbanwe.
Akwụkwọ Ahịa Ahịa Digital bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ịzụ ahịa ọhụụ ma jee ozi dị ka akụ dị oke egwu maka ndị ahịa, na-enye usoro dị egwu nke na-eduzi ndị na-ere ahịa site na omume kacha mma ma na-eme ka usoro a na-emegharị na nzukọ ahụ dum.
Site na itinye a Akwụkwọ Ahịa Digital Ahịa ngwọta, ahịa ndú nwere ike iri uru nke miri emi gbasara nyocha nghọta na ezigbo oge iji gosi ngwa ngwa itinye aka na asịwo mkpa na otú amụọ na-enwe ọganihu na-aga. Ndị otu na-erite uru site na visibiliti agbakwunyere n'ime ihe na-arụ ọrụ yana ihe anaghị edozi nsogbu tupu ha emetụta ahịa.
N'agbanyeghị eziokwu na anyị bi na ụwa dijitalụ, ụfọdụ ndị otu ahịa ka na-eji PDF ma ọ bụ akwụkwọ eji egwu egwu. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ndị a nọ n'ụzọ ziri ezi maka imezi usoro ahịa ha, akwụkwọ ọgụgụ eji ede akwụkwọ enweghị ahaziri onwe ya yana ikike dị ike iji mee mmekọrịta miri emi na ndị ahịa n'oge a.
Leverage ndị kachasị ọhụrụ Akwụkwọ Ahịa Digital Ahịa teknụzụ, ma na-atụgharị akwụkwọ eji ede akwụkwọ ma ọ bụ PDF na-agbanwe agbanwe n'ime ngwọta ire ahịa na-agbanwe agbanwe, yana ịmezigharị ahụmịhe azụmaahịa, nwere ike melite atụmatụ ahịa nke otu wee mepụta ihe bara uru karị na in-ekwu okwu mkparịta ụka ndị na-azụ ahịa, ka ha na-ewepụta ọdịnaya ziri ezi mgbe ọ dị mkpa. N'ebe azụmahịa taa, ndị ahịa ga-enwerịrị ohere iji nweta nkwukọrịta n'ụzọ dị irè na atụmanya. Nọ n'ihu na-agbanwe agbanwe chọrọ na mkpa bụ ụzọ kachasị mma iji mechie nkwekọrịta.
Lee usoro ise kachasị mma mgbe ị na-ebugharị Akwụkwọ Ahịa Ahịa Digital
Tụlee otu dị iche iche na-eji Ahịa Playbooks - Buru n'uche, Ahịa Playbooks abụghị naanị maka ndị na-abụghị ndị ahịa ahịa. Dynamic na ahaziri Ahịa Playbooks nwere ike hụ na otu niile, site na njikwa na ahịa, nwere ozi ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị iji meziwanye ahịa ma debe usoro ahụ.
Jiri usoro ndebiri yana rụọ ọrụ rụọ ọrụ oge niile - Oge bu ego ahia. Reamkwado ọrụ na-ewe oge ma na-agbaso usoro edepụtara edepụtara ka nrụpụta na arụmọrụ ka mma. Nke a na - enyere ndị ahịa aka iwepụtakwu oge ịre na oge pere mpe.
Mgbasa ozi ndị ọzọ maka ọdịnaya ndị ọzọ - PDFs na njikọta abụghị naanị ụzọ isi rie ọdịnaya. Na gburugburu ebe obibi ọtụtụ mgbasa ozi nke oge a, ihe ngosi PowerPoint, vidiyo, edemede, ederede blọọgụ na ihe ndị okike na-eme ka ndị na-aga ahịa were iwebata ọdịnaya ahaziri iche na nke ọma. Leverage plethora nke ọdịnaya dị ma hazie ihe ị jiri dabere na ọnọdụ ọrịre ọ bụla.
Nye ezigbo ntụzịaka na nkuzi nkuzi - Inye ndị na-ere ahịa ahịa nnweta ozi oge dị na azụmaahịa na-enye ha nghọta bara uru mgbe ha na-ewulite ntụkwasị obi ma na-akwadebe ha maka mmeri. Isi ihe dị na ya bụ ịghara imeri ha niile na ozi niile dịnụ. Kama nke ahụ, gbado anya n'ịmepụta omume kachasị mma na ịnye ha naanị data ha chọrọ na ọnọdụ nke azụmahịa ahụ n'aka.
Bido iji ngwaa egwu egwu (dika, omume, nye) - activitiesre ire ere na-agbagwoju anya, ogologo na nkewa. Iduzi ndozi ahia na ime ihe ngwangwa ma kwụ ọtọ n'ụzọ dị mfe iji rụọ ọrụ dị mfe na-enyere aka mee ka usoro ahịa ahụ dị mfe, ma kwadoo n'ụzọ ziri ezi na njem onye zụrụ ahịa.
Tags: ihe eji egwu egwu dijitalụahịa dijitalụdijitalụ ahịa playbookdijitalụ ahịa playbooksoge ireUgwuekendị isi ahịaere ogeere azum